Anogadzirwa mugadziri anosimbisa dhizaini yeiyo iPhone 7 | IPhone nhau
Mukurumbira wekushandisa unogonesa iPhone 7 dhizaini
Sezvatakataura pazviitiko zvakasiyana, kwenguva yakareba Apple yanga isingazive kana kuti yaisada (asi iyo yekupedzisira) kuchengetedza chakavanzika nezve iyo inotevera iPhone yavanofanira kuvhura ichave yakaita. Gore rino iro iPhone 7 uye, kunze kwekushamisika, isu tatoziva kuti dhizaini yacho ichave yakafanana chaizvo neiyo iPhone 6, asi nekubata kudiki kunodiwa kuisa akasiyana Hardware. Panguva ino, zvese zvatinoziva zvinobva mumakuhwa, asi NoWhereElse akatumira mifananidzo ye iPhone 7 kesi kubva kune ane mukurumbira zvigadzirwa zvekushandisa izvo zvaizosimbisa dhizaini iyo yatave kuona mumavhiki apfuura.
Iyo inozivikanwa brand, maererano neveFrance vezvenhau nekuti ini ndaisazviziva (kunyangwe ini ndisingashandise akawanda mavhavha futi), iri Sanfeng, mumwe wevanogadzira zvigadzirwa zveChinese zvakavimbika pamusika. Mifananidzo yacho inoratidza kesi yezvinoratidzika kunge iPhone 6 / 6s, asi isina chiteshi chefoni uye kamera yakakura zvishoma, padhuze nemucheto wefoni uye isina ringi, asi neburi rinobuda mune imwechete kesi.
Chinese mugadziri anosimbisa dhizaini yeiyo iPhone 7
Iyo mifananidzo, iyo iwe unayo muhukuru hwepanyama mune inotevera gallery, iri zvakangofanana nere render pamusoro pemitsara iyi. Kwandiri izvi zvine kukosha nekuti zvaizosimbisa kuti imwe inopa, iyo yeiyo iPhone 7 Plus / Pro, inoenderanawo neiyo iPhone inomiririra uye ichave ine mbiri kamera uye Smart Connector, izvo zvatichiri kufanira kuziva icho chinobatanidza chinoshandiswa. Apple nharembozha pane hombe apple.
Kana mamwe makuhwa ari echokwadi, iyo iPhone 7 kamera ichave ichibva 21Mpx. Kuenzanisa saizi yayo neiyo ye iPhone 6 / 6s, ehe kuti kumwe kusimudzira kunotarisirwa mukamera yeiyo 4.7-inch iPhone gore rino, asi kuenda kubva ku12Mpx kuenda ku21Mpx inoita kunge yakawandisa kwandiri. Ehezve, chero bedzi iyo mhando ichichengetedzwa (megapixels ingori saizi), ini ndinogona kufara nekuvandudza ikoko. Sezvatinogara tichitaura kana ruzivo rusina kusimbiswa ruchioneka, Gunyana ichagadzirisa kusahadzika kwedu kwese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Mukurumbira wekushandisa unogonesa iPhone 7 dhizaini
Zvakanakisa zvevhiki muActualidad iPhone
Rarama nesu WWDC 2016 ipapo Joinha isu!